यी देशका राजाले प्रत्येक वर्ष कुमारी केटीसँग विवाह गर्छन्, जान्नुहाेस कति पुगे पत्नी र छोराछोरी र ? – List Khabar
Home / रोचक / यी देशका राजाले प्रत्येक वर्ष कुमारी केटीसँग विवाह गर्छन्, जान्नुहाेस कति पुगे पत्नी र छोराछोरी र ?
यी देशका राजाले प्रत्येक वर्ष कुमारी केटीसँग विवाह गर्छन्, जान्नुहाेस कति पुगे पत्नी र छोराछोरी र ?
admin February 11, 2022 रोचक Leaveacomment 136 Views
देशका राजामाथि कयौँ जिम्मेवारी हुुन्छन् जुन पालना गर्नैपर्छ । राजाले आफ्ना सन्तान मात्रै होइन सम्पूर्ण जनताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उनले आफ्ना जनताको सबै दुुःख पीडा बुुझ्नुु पर्छ ।
विश्वका धेरैजसो देशमा राजतन्त्र विस्तारै समाप्त हुँदै छ । केही देशमा मात्रै राजतन्त्र कायम छ । त्यस मध्येको एक अफ्रिकी देश स्वाजिल्यान्ड पनि हो । यहाँको राजाका व्यवहार बारे थाहा पाउँदा तपाई पनि अचम्म लाग्ला ।
एक रिपोर्ट अनुुसार पर्वमा सहभागि हुने केटीहरुमध्ये एकलाई राजाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो रानी बनाउँछन् । सबै भन्दा अचम्मको कुरा के छ भने यी केटीहरु बिना कपडा राजा र उनको सम्पूूर्ण प्रजाको अगाडि नृत्य गर्छन् ।
यो परम्पराको कयौँ युवतीले बिरोध गर्ने गर्छन् । कतिपयले यो परेडमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राजाले यसबारे थाहा पाएपछि केटीहरुको परिवारले ठूलै जरिवाना तिर्नुु परेको घटना पनि सार्वजनिक छ ।
यहाँका राजाले अत्यन्तै शानदार जीवन बिताउने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यहाँका धेरैजसो जनता अत्यन्त गरिबीमा जीवन यापन गर्दै आएका छन् । २०१५ मा भारत–अफ्रिका शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन राजा मस्वाती तृतीय भारत पनि गइसकेका छन् ।
राजा मस्वाती तृतीय आफूसँग १५ श्रीमती, छोराछोरी र १०० नोकर लिएर आएका थिए । उनका लागि दिल्लीको एक पाँच तारे होटलमा २०० वटा कोठा बुक गरिएको थियो ।
Previous बँदेलको पेटमा भेटियो यो वस्तु, करोडपति भए भेट्ने मानिस
Next प्लेनमा ज’न्मिएका ब’च्चाहरूले कुन देशको ना’गरिकता पा’उँछन् ?